I-chalet ezolileyo & epholileyo eStebleva, kwipaki yesizwe.
Indawo yam iseStableva, kwipaki yesizwe, iParku Nacional Shebenik-Jabllanice. Ukuhamba kakuhle, ukukhwela intaba ngebhayisekile. Intaba emangalisayo kunye nentlambo. Uthule kakhulu kwaye uzimele. Intabalala yezilwanyana zasendle. Umoya omtsha kunye nemikhosi efudumeleyo. Ukutya okusandula ukwenziwa kunye nezithako ezilinywa ekuhlaleni. Ndiya kuba bappy ukukhokela naluphi na uhambo lokuhamba okanye ukuqhubela phambili ukukhokela indawo ngentlawulo encinci. Iibhedi ezitofotofo kakhulu, ikhitshi esebenza ngokupheleleyo. Indawo yam ilungele izibini, abantu abazihambelayo, iintsapho (ezinabantwana), amaqela amakhulu, kunye nezilwanyana zasekhaya.
Le chalet imnandi iyathandeka ngalo lonke ixesha, kodwa ngakumbi ngokuhlwa emva kokuhamba ixesha elide, xa unokubeka indawo yomlilo yeenkuni kwaye uphole phezu kwekomityi yeti ekhuliswe ekuhlaleni okanye iwayini. Umamkeli, wazalelwa kwaye wakhulela kule lali yembali, kumda waseMakedoni, ngoku ishiywe kakhulu ngabemi bayo abayisebenzisa kakhulu njengendawo yeholide. Imbali yelali ibanga indawo yokuzalwa kootatomkhulu bakaQemal Ataturk, umlawuli weTurkey yanamhlanje. Kananjalo inamabhodlo ezindlu zoonongendi, iicawa ezingaphezulu kwe-1800 ukuphakama ukusuka kubantu abaninzi kunye nemikhosi eyadlula kuyo kwimbali yayo ende kakhulu; Abantu baseTurkey, baseBulgaria, baseMacedonia nabaseSerb. Abantu bale lali bathetha isiAlbania nesiBulgaria sakudala yaye bebesoloko bephila ngemvisiswano phakathi kweenkonzo ezimbini eziphambili zamaKristu obuOthodoki namaSilamsi.
Indlu esecaleni kwendlu, ihlala umalusi oya kuthi ngobubele anike ubisi olutsha, amaqanda kunye nenyama. Isonka siya kwenziwa ekhaya kwaye iincoko ziya kukuthakatha. Amanzi ayindalo ngokugqibeleleyo kwaye avela kwiintaba zendawo. Kukho imithombo yamanzi engama-87 kwilali.
Ukutya kwasekuseni kuya kuba lula kodwa zonke zikhule ngokwazo kwaye zenziwe ekhaya. umamkeli uya kuzama ukuzalisekisa izicelo zakho kangangoko unako.